Venezoela: Voalaza fa nanakana tranonkalam-baovao ny mpamatsy tolotra aterineton’ny fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2019 4:18 GMT
La Patilla” tsy mandeha ity tranonkala ity”. Fanakanana? Inona no mitranga? Inona ireo tsahon'ny fanakanana?
Nanakana tranonkala toy ny La Patilla ny Cantv, afaka mitatitra izany sy izay fanakanana hafa ao amin'ity tranonkala ity ianao.
“La Patilla” dia tranonkala endrika bilaogy natokana ho an'ny vaovao amin'ny ankapobeny, ny fandraharahana sy ny fialam-boly ary i Alberto Ravell, mpanao gazety sady mpiara-mpanorina ny fantsom-baovaon'ny mpanohitra, Globovisión no tompony.
Voalaza fa misy ifandraisany amin'ny famoahan'ny tranonkala lahatsary [es] sy fandefasana mivantana ny tao amin'ny fonjan'ny Planta ny fanakanana, fonja izay nisian'ny fifandonana teo amin'ireo gadra sy ny polisy tao anatin'izay andro vitsy lasa izay, ary zara raha taterin'ny fampitam-baovao ofisialy.
Fanakanana tanteraka ny La Planta. Nakaton'izy ireo ny La Patilla ka tsy azo jerena ny Ustream ary avy eo notapahan'izy ireo ny herinaratra ka tsy afaka naely izany.
Mihevitra ireo adala ao amin'ny Cantv fa hamaha ny krizin'ny La Planta amin'ny alalan'ny fanakanana ny tranonkalan'ny La Patilla.
Araka ny filazan'ireo mpiserasera, dia azo idirana amin'ny alalan'ny mpamatsy tolotra aterineto hafa sy amin'ny alalan'ny fampiasana proxies ny tranonkala. Namoaka lahatsoratra [es] mihitsy aza ity tranonkala ity izay nilazany fa nanova ny IPn'ny tranonkala izy ireo taorian'ny fitarainana, ary nosakanana ihany koa ity IP faharoa ity dimy ambinifolo minitra taty aoriana. Voalaza fa nifandray tamin'ny Cantv.net izy ireo izay nilaza fa:
Amin'ny maha fampitam-baovao, mampahafantatra anao amin'ny fomba ofisialy ny toe-javatra izahay. Raha tsy mahazo valiny izahay, dia hiditra amin'ny fametrahana fitoriana ofisialy mikasika ny toe-draharaha.
Tsy vao sambany ny Cantv no voampanga ho manakatona tranonkala. Tamin'ny tranga teo aloha, nitatitra olana amin'ny fidirana ao amin'ny Blogger sy Wordpress, ankoatra ireo tranonkala hafa ny mpiserasera.